Yehowa kum Lewiatan (1)
Wɔde Israel toto bobefuw ho wɔ dwom mu (2-13)
27 Saa da no, Yehowa de ne sekan kɛse denneennen a edi awu no+Bɛba Lewiatan* so, ɔwɔ a ne ho yɛ hare no.Ɔde bɛba Lewiatan so, ɔwɔ a okyinkyim ne ho no,Na obekum aboa kɛse a ɔwɔ po mu no. 2 Ɛda no, monto dwom mma no* sɛ: “Bobefuw* a emu nsã* puw ahuru!+ 3 Me, Yehowa, me na mehwɛ no.+ Migugu no so nsu bere nyinaa.+ Mehwɛ no awia ne anadwo,Na obi anyɛ no bɔne.+ 4 Abufuw biara nni me mu.+ Hena na ɔde nsɔe ne nwura bɛba m’anim wɔ ɔko mu? Metiatia so na mede ogya ato ne nyinaa mu. 5 Gye sɛ oso m’abannennen mu denneennen. Ma ɔne me mmɛka asomdwoesɛm;Asomdwoesɛm na ɔne me mmɛka.” 6 Nna bi bɛba a Yakob begye ntini,Israel bɛfefɛw agu nhwiren,+Na wɔde nnɔbae bɛhyɛ asaase no so ma.+ 7 Ɛsɛ sɛ wɔhwe no sɛnea ne hwefo hwee no no anaa? Ɛsɛ sɛ wokum no sɛnea wokum ne nkurɔfo no anaa? 8 Sɛ worepam no akɔ a, wobɛteɛm ne no adi asi. Obehuw mframa dennen apia no akɔ, ɛda a apuei mframa bɛbɔ no.+ 9 Enti saa kwan yi na wɔnam so bɛpata Yakob bɔne,+Na sɛ woyi ne bɔne kɔ a, aba a ebefi mu aba nyinaa ni: Ɔbɛma afɔremuka abo no nyinaaAyɛ sɛ akado a wɔayam,Na wɔrennyaw abosonnua* anaa ade biara a wɔde hyew aduhuam.+ 10 Efisɛ kurow dennen no bɛda mpan;Wɔbɛma mmoa adidibea ada hɔ kwa, na wɔagyaw ato hɔ sɛ sare.+ Ɛhɔ na nantwi ba bedidi na wabutuwAwe ne mmãã.+ 11 Sɛ ne nnubaa no wo a,Mmea bɛba abebubuAkɔsɔ gya. Efisɛ ɔman yi nni ntease.+ Ɛno nti wɔn Yɛfo no yam renhyehye no mma wɔn,Na wɔn Nwemfo no renhu wɔn mmɔbɔ.+ 12 Saa da no, Yehowa bɛporow aba no afi Asubɔnten no* ano akosi Egypt Subon+ ano. Na mo Israelfo nso, wɔbɛtase mo mmaako mmaako.+ 13 Ɛda no, wɔbɛbɔ abɛn kɛse bi,+ na wɔn a wɔayera wɔ Asiria asaase so+ ne wɔn a wɔabɔ wɔn apansam Egypt asaase so+ no bɛba abɛkotow Yehowa wɔ bepɔw kronkron no so wɔ Yerusalem.+
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛfa Israel ho. Ɛha yi wɔka ne ho asɛm sɛ ɔbea bi a wɔde no toto bobefuw ho.